Tag: google gbanwere | Martech Zone
Tag: mgbanwe google
Mgbe ndị mmadụ gwara m na ha nwere onye SEO saịtị ha dị ka a ga - asị na ọ bụ otu emume, a na m ajụkarị onye na - arụ ọrụ ahụ. Njikarịcha abụghị oru ngo nke na-amalite ma kwụsị. Asọmpi na-agbanwe mgbe niile, teknụzụ na-agbanwe mgbe niile, ndị na-ege ntị na-agbanwe mgbe niile… na Google Algọridim na-agbanwe mgbe niile. Anyị na mbụ tinyela na mgbanwe Google Panda - mana ozi ama ama a zuru oke. Idebe n'elu mgbanwe ndị a bụ